Iran : Nifarana tany amonja ny diam-panoherana nataona mpitondra fivavahana · Global Voices teny Malagasy
Iran : Nifarana tany amonja ny diam-panoherana nataona mpitondra fivavahana
Voadika ny 31 Jolay 2008 21:28 GMT
Mpitondra fivavahana Iraniana antsoina hoe Ali Reza Jahanshahi no nosamborina tapabolana lasa izay, rehefa nanomboka ny diam-panoherana 960 kilometatra (590 maily) avy any an-tanna atsimon’i Iran Sirjan ho any Teheran. Notoherin’ilay mpitondra fivavahana manko ny kolikolim-pakana tany tao Sirjan ary nitarainany ny fitondrana mahefa ho tsy miraika loatra amin’ity raharaha ity. Nosamborina i Jahnashahi raha vao nahavita 30 kilometatra akaikin’ny tanànan’i Abadeh.
Maro tamin’ny mpamaham-bolongana mpitahiry ny fahazarana Iraniana sy mpanohana ny repobilika Isilamika no nanambara ny fanohanany ity diam-panoherana ity, ary niantso ny mpitondra mahefa hamotsotra azy. Maro tamin’ireo mpianatra Isilamika sy mpitondra fivavahana tokoa no nanao fihetsiketsehana ho fanafahana azy. Maro tamin’ireo mpikambana sy mpamaham-bolongana ireo no mpikambana ao amin’ny Fikambanan’ny Mpianatra Mitady ny Rariny, vondrona Isilamika sy mpitandro ny fahazarana izay mitsikera ny mpitondra Iraniana ho tsy mihetsika loatra hiady amin’ny kolikoly.
Etsy andaniny koa, zara raha taterin’ny mpamaham-bolongana mpitaky ny fanavaozana sy ivelan’ny fivavahana ity fitazonana amponja mpitondra fivavahana ity. Manaporofo tokoa izao ny fizarazaran-kevitry ny ny tontolom-bolongana Iraniana.
Namoaka ny sarin’ilay mpitondra fivavahana maromaro [Fa] ny mpamaham-bolongana Mostazafin (midika hoe ‘voateritery’ amin’ny teny Perisiana), izay nanaraka akaiky ny vaovao momba ity fanoheran’i Jahnashahi ity, ary nolazainy fa gazetin’ny mpianatra miisa 18 no namoaka fanambarana hanohanana ny diam-panoherana revolisionera ataony.
Naka ny sombin’ny filazana nataony izy:
“In Sirjan we witnessed how power circles and capitalists illegally took control of many properties that belong to the Iranian people… People who acted against Islamic Republic law and Islam.”
« Vavolombelon’ny fakan’ny Kapitalista sy manampahefana amin’ny tsy rariny sy tsy ara-dalana ny ankamaroan’ny tanin’ny vahoaka Iraniana izahay eto Sirjan… (Tena) olona mandika ny lalànana’ny Repobilika Silamo sy ny Isilamo ireo »
Hoy ny filazan’i Mostazifin momba ny hetsiky Jahnashahi:
“For two years he tried to attract the Iranian authorities’ attention to enormous financial corruption, but nobody paid any attention… What happened in Sirjan is just an example of what is going on across Iran.”
« Efa roa taona izay izy no nanaitra ny mpitondra Iraniana amin’ny haben’ny kolikoly ifanakalozana saingy tsy noraharahiana… Inona moa no mitranga raha singa hita manerana an’Iran manontolo hay izao any Sirjan izao ? »
Markazinews moa nanoratra fa mpitandro ny filaminana miisa 6 no nisambotra an’i Jahanshahi nanery azy hiditra anaty fiara raha mbola tao amin’ny Môsikea izy. Araka ny tatitra dia nosamborina izy satria mandika ny fitsipika mifehy ny mpitondra fivavahana.
Nalain’i Markazinews ny sombim-panambaran’ny Mpianatra mitady ny Rariny, mampahatsiahy ny tenin’ny Ayatollah Khomeini, mpitarika ny Repobilika isilamikan’i Iran teo aloha, fa tsy mahazo manadino ny mahantra sy ny vahoaka tsy mikiraro ny mpitondra fivavahana … Nohazavazavain’izy ireo fa tsy ho andeferany ny kitoatoa ataon’ny mpitondra fanjakana, ary hotontosainy ny adidy revolisionera ataony.
Bignaehstiz indray namoaka badge (mari-pamantarana) hanohanany ilay mpitondra fivavahana ary mivaky toy izao “Ho fanoherana ny kolikoly ao Sirjan, dia miaraka amin’i Jahanshahi izahay.” Nampian’ny mpamaham-bolongana moa fa misy mpianatra sy mpitondra fivavahana manohana azy ka hiara-dalana aminy eny atsefatsefan-dalana eny hanoherana ny kolikoly.
Kashmar injao mitsikera ny Fitsarana Manokan’ny Mpitondra Fivavahana izay namoaka ny didim-pitsarana hisamborana sy hamonjana an’i Jahanshahi, ka manontany hoe nahoana moa tsy ny mpitondra fivavahana manao kolikoly no enjehiny.
Namoaka mari-pamantarana moa ny Muslim Bloggers Association(fikambanan’ny mpamaham-bolongana Silamo) izay milaza fa ny mpitondra fivavahana mpanao tsolotra no tokony samborina fa tsy ny mpitondra fivavahana avy any Sirjani.